जापानी ट्याटु : इरेजुमीको अर्थ अनि जापानको केहि लोकप्रिय ट्याटु डिजाईन | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > जापानी ट्याटु : इरेजुमीको अर्थ अनि जापानको केहि लोकप्रिय ट्याटु डिजाईन
के हजुरले आफ्नो जिउमा ट्याटु बनाउनु भएको छ। यदि छैन भने पक्कै पनि एउटा बनाउ भन्ने सोच मनमा आएको होला। धेरै मानिसको जिउमा हुने ट्याटुले उनिहरुको जीवनमा घटेको महत्व पूर्ण घटना, व्यक्ति वा बस्तुलाई जनाउने हुन्छ। ठाउँ अनुसार ट्याटुको महत्व पनि फरक फरक हुन्छ। विस्वको अनेकौ जनजाति समुदायमा ट्याटुले त्यो समुदायको धर्म र संस्कृतिलाई समेटेको हुन्छ। अहिलेको पश्चिमी समाजमा भने ट्याटु फेसन र सौन्दर्यको लागि बनाइने थुप्रैको भनाइ छ। जापानमा भने ट्याटुहरुले अनेकौ कुराको चित्रण गर्दछ।
यदि हजुर जापानको ओन्सेन जानु भएको छ भने त्यहाँ ट्याटु देखाउन मनाही हुन्छ। गर्मि महिनामा पनि मानिसहरु पार्कमा निस्किदा आफ्नो ट्याटु छोप्ने गर्दछन। जापानमा सार्वजनिक स्थलमा ट्याटु देखेर मानिसहरु हिद्दैनन। यस पछाडीको कारण चाहि ट्याटुलाई याकुज़ा संग जोड्नु हो। जापानका माफिया मानिने याकुजाहरु आफ्नो शरीरमा ट्याटु रंगाउने गर्दछन।
पहिले पहिले जापानमा ट्याटुले त्यो मानिसको सामाजिक स्ट्याटस देखाउथ्यो। ट्याटुलाई आध्यात्मिक प्रतीक मानिन्थ्यो। यो बुद्ध धर्ममा पनि देखिन्छ । कालान्तरमा यो जिउ खोप्ने कलाले अपराधको परिचय लिन थाल्यो। यहि अपराधसंग को संलग्नताले गर्दा याकुजाहरुले ट्याटु बनाउने मानिन्छ। अपराध संग जोडिएपनि जापानी ट्याटु कलालाई बिदेशीहरु निकै उत्कृष्ठ मान्दछन। यो जापानी कारिगरी देखेर जो कोहि पनि मोहित हुन्छन। जापानी ट्याटुमा प्रयोग गरिने चित्र र प्रतिकको विशेष अर्थ हुने गर्दछ| यदि हजुर पनि जापानी स्ताईलको ट्याटु बनाउने सोच्दै हुनु हुन्छ भने, यी चित्र र प्रतिखारुको अर्थ थाहा पाई राख्नु राम्रो हुन्छ। जापानमा प्रयोग हुने ५ ट्याटु प्रतिकहरु तल दिइएका छन्।
१. द जापानीज ड्रागन
ड्रागनहरु जापानी र चिनी संस्कृतिको सदिऔ सम्म अभिन्न अंग रहेको छ। जापानी ड्रागन धेरै जसो पानी संग सम्बन्धित हुन्छ। केहि ड्रागन बुद्धको मन्दिर संग सम्बन्धित हुन्छन। त्यसैले बुद्धको मन्दिरमा ड्रागनको आकृति कुदिएको पनि थुप्रै भेटिन्छ। पश्चिमी मुलुकमा ड्रागनले सम्पति, शक्ति र आक्रामक प्रकृति जनाउछ। कथाहरुमा कहिले दैत्य व्यवहार जनाउने द्रागंले कहिले उदार स्वभाब र मानवताको निम्ती लागि पर्ने देखाउछ। ड्रागनले बुद्धि र विवेक पनि जनाउछ।
२. द टाईगर
A post shared by Japaneseinksoul (@japaneseinksoul) on Aug 17, 2017 at 12:53am PDT
टाईगरलाई जापानीमा तोरा भनिन्छ। खासमा भन्नु पर्दा ट्याटुमा टाईगर चिनी संस्कृतिबाट अपनाईएको हो। बाघ जस्तै यो प्रतीकले बल, साहस र लामो आयु जनाउछ। यसले दुष्ट आत्मा र दुर्भाग्यबाट जोगाउने मान्यता छ। त्यसैगरी शरीरमा तोराको प्रतीकले रोग ब्याधबाट पनि जोगाउने भनिन्छ।
यहि कारणले धेरै जापानी ट्याटुकलामा टाईगरको चित्रण गरिएको देखिन्छ। बाघको ट्याटु बनाएमा दिर्घायु हुने र काम गर्न साहस मिल्ने जनाइन्छ।
३. छाल र पानी
Waves for Rachel, from her request, thanksalot! Done at @outlawz.tattoo ,🇨🇭 BERN, thanks again to everyone at the studio for your lovely hospitality, I'll be back between 6-11 May!!! Nexts guest-spots: 🇩🇪 HAMBURG 28-30 March, @traphouse_tattoos_hamburg 🇩🇪 LEIPZIG 17-20 April, @studio_394 🇩🇪 KÖLLN 25-27 April, @traphouse_tattoos_cologne 🇨🇭 BERN 6-11 May, @outlawz.tattoo #berntattoo #swisstattoo #berlintattoo #berlintattooer #berliner #berlintattooartist #hamburgtattoo #leipzigtattoo #kölntattoo #blinework #graphictattoo #contemporarytattooing #alternativetattoo #illustrationtattoo #inkdesign #inkstagram #inkspiration #wavestattoo #ladytattooers #guestartist #blxckink #enmanierenoire #pics_of_inked_ #blackworkartists #blacktattoomag #blackart #vladbladirons #tattoolookbook #tatuage
Tana Torrさん(@tana_torr_tattoo)がシェアした投稿 – 2019年 3月月17日午前8時04分PDT
जापानी ट्याटुमा छाल र पानीको चित्रणपनि उत्तिकै देख्न सकिन्छ। छाल त जहाँ जापानी चित्र कलाको अतुल्य प्रतिक हो। चाहे सानो खोलाको छाल होस् वा ठूलो सुनामी, यसको चित्रण जापानी कलामा अपरिहार्य छ। पानी र छाललाई कोई माछा, ड्रागन र राक्षस (ओनि) संग मिलाएर लोभलाग्दो कला दिइन्छ। पानीलाई जापानी संस्कृतिमा ठूलो शक्तिको रुपमा लिईन्छ। यो शालीन पनि हुने र बिकराल रुप पनि लिन सक्ने हुनाले पानीको महत्व जापानी कलामा बिशाल छ। त्यसै गरि पानी जीवन र संसारको लागि नभई नहुने भएकोले ट्याटू कलामा पनि यो लोकप्रिय भएको हो।
४. कोइ माछा
A post shared by Nami / Horinami / Nammymetal (@nami3t) on May 6, 2016 at 10:18am PDT
कोइ एक प्रकार को कार्प माछा हो। जापानमा यो माछालाई निकै माया र सद्भावले हेरिन्छ। कोइ माछालाई मन्दिरको पोखरी, खोलामा राखिन्छ। त्यसैगरी पुरानो मन्दिर, कृतिहरुमा यो माछाको चित्रण गरिन्छ। कोइ माछाले पुरुषत्व गुण जस्तै साहस र बल जनाउने मानिन्छ। चीनमा कोइ माछाहरुले एल्लो रिभर उल्टो तर्न खोजेको र केहि मात्र सफल भएको, ति सफल माछाहरु ड्रागनमा परिणत भएको दैत्य कथा छ। यदि हजुर पोकिमोनको फ्यान हुनुहुन्छ भने , पक्कै पनि मागीकार्प पछि बलियो ड्रागनमा परिणत हुने देख्नु भएको होला। यो येही कथाबाट लिईएको हो।
A post shared by Irezumi Study (@irezumistudy) on Aug 14, 2017 at 5:50pm PDT
साकुरा जति नै सुन्दर हुन्छ त्यति नै चाडो झरेर जान्छ। जापानीहरु साकुराको फूललाई मानिसको जीवनसंग दाजछन्। जसरि साकुरा फूल ओइलाएर झर्छ, मानिसको चोलापनि एउटा समय पछि ओइलाएर जान्छ। त्यसैगरी साकुराले माया, ममता, सुन्दरता र अन्तिममा झरेर सकिनुलाई चित्रण गर्छ। यहि अर्थले जापानी ट्याटुमा साकुराको फूलको चित्रण गरिन्छ। मानिसको जीवन जति नै सुन्दर र बिशाल भएता पनि अन्तिममा मरेर जानु नै सत्य हो। यहि हो यो साकुरा प्रतिकको अर्थ।
आशा गर्छु हजुरले जापानको ट्याटु कलामा प्रयोग हुने चित्रहरुमा लुकेको अर्थ बुझ्नुभयो होला। ट्याटुलाई अपराधिक क्रियाकलापसंग जोडिएता पनि यो जापानको थुप्रै कला मध्य एक सुन्दर कलाहो र यसमा जापानको संस्कृति लुकेको छ।
नया JLPT परिक्षा, थाह पाई राख्नु होस् कसको लागि र कस्तो हुनेछ परिक्षा।
टोकियोका यी साना तर राम्रा ६ कफी सप
जापानीज भाषा पढ्नु वा पढ्दैगर्नु भएकाहरुलाई पक्कै पनि जापानीज ल्यांगेज प्रोफिसेंसी टेस्टमा ’boutमा जानकारी होला। यसलाई छोटकरीमा JLPT भनिन्छ। विद्यार्थीहरु आफ्नो निहोंगो(जापानिज)को लेभल थाह पाउन यो परिक्षा लिन्छन। जापानमा कम्पनीहरुमा काम गर्नपनि यो परिक्षा पास गरेको सर्टिफिकेट हुनुपर्छ। कम्पनीहरुले प्राय N२ वा N१ लेभल पास गरेको क्यनडिडेट खोज्छन। तर हालसालै परिक्षार्थीहरुले JLPTको परिक्षा व्यावहारिक नभएको…
पहिलो चोटी आमा बन्नलागेकाहरुको लागि प्रेगनेन्सी निकै रोचक र अप्रत्याशित स्थिति बन्न सक्छ। यस्तो बेलामा के गर्ने , कस्तो व्यवहार गर्ने, कसको सल्लाह सुन्ने भन्ने कुरा मनमा खेलीनै रहनछ। त्यस माथि आफ्नो समाज र देश भन्दा बाहिर बच्चा जन्माउने र हुर्काउनेहरुको लागि अनेक बाधक खुड्किलाहरु आइपर्छन। jp.fotolia.com/ जापानमा मातृ र शिशु मृत्यु दर विश्व न्युन…
द ल्याण्ड अफ राइजिङ्ग सन, जापान जति टेक्नोलोजीमा विकसित छ त्यति नै व्यापक छ यसको पप कल्चर। विश्व युद्ध २ ले पूर्ण रुपमा जिर्ण बनाएको यो देशले द्रुत रुपमा आर्थिक मुहार मात्र फेरेन, संस्कृति र सम्पदामा पनि विश्वकै उदाहरण बनेर उभियो। अनेकौ ओमाचुरी, गेइस्य्या कल्चर, टी सेरेमोनी (ओसादोउ) जापानी संस्कृतीका केहि सामान्य उदाहरण मात्र हुन।…
जापानको के.जी., प्राथमिक तह, निम्न माध्यमिक तहमा हरेक बर्षको बसन्त (मे-जुन) वा शिशिर(सेपतेम्बर) मा स्पोर्ट्स फेस्टिभल हुने गर्दछ। यसलाई जापानीमा उन्दोखाई (運動会） भनिन्छ। उन्दोखाई सनिबार वा आइतबार सार्बजनिक बिदामा हुन्छ। यो दिनलाई सफलता पुर्वक सम्पन्न गराउन बिद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिका बेजोडले लागि पर्छन। यो सामुदायिक ईभेण्ट भएकोले स्कुल वर्ग हप्तौ लामो तयारि गर्छन। यो दिन,…
होकाईदोको तिन ताल जसले हजुरलाई प्रकृति संग मिलाउने छ